The Irrawaddy's Blog: အတုယူဖွယ် လောင်စာဆီချွေတာရေး လှုပ်ရှားမှု
အတုယူဖွယ် လောင်စာဆီချွေတာရေး လှုပ်ရှားမှု
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ စည်းပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကားသုံးစွဲမှုများလာသလို ကား ရပ်နား ဖို့အတွက် နေရာရှာရတာလည်း အတော်ခက်ခဲပြီး လောင်စာဆီ အပိုကုန်တာတွေကြောင့် အခုဆို S Oil အဖွဲ့ က Here လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လှုံ့ဆော်မှု လုပ်ဆောင်တာ အောင်မြင်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုရီးယာနိုင်ငံမှာ လူ ၂.၅ ဦးမှာ ကားတစီးနှုန်း ပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲနေပြီး ကမ္ဘာတလွှား လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု အများဆုံး နိုင်ငံစာရင်းထဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ပါလာပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် လောင်စာဆီဈေးက လည်း တလီတာကို ၂.၁၇ ဒေါ်လာ နှုန်းထိ ရှိနေပြီး ကားရပ်နားဖို့ နေရာရှာ ရတာ တနေ့ကို မီတာ ၅၀၀ နှုန်းလောက်နဲ့ တလဆိုရင် ကားက မီတာ ၁၅၀၀၀ ( ၁၅ ကီလို မီတာ ) ထိ မောင်းကြရတော့လောင်စာဆီ အပိုကုန်နေပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့် ကားစီးသူတွေအတွက် အတော် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ S Oil ကုမ္ပဏီက ကားရပ်နားဖို့ နေရာရှာရလွယ်ကူအောင်နဲ့ လောင်စာဆီ သက်သာစေ ဖို့ Here Campaign ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က စပြိး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ထားသလဲ ဆိုတာ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း အလားတူ လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်သက်သာ၊ လောင်စာဆီ သက်သာကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်ပါတယ်။
following is the today's news from BBC website. Please say something about this news ......comparing and contrasting with Our " NYUNT NYUNT ' in Myanmar.
If you read this news, you Irrawaddy team will know what I mean. and you will know what to write about that ' NYUNT NYUNT .
thank you. I share this with you.
this is not related area. But I have nowhere to send to you. Except in here. Thanks .
A Brazilian former army colonel who admitted torturing and killing political prisoners under military rule up to the 1980s has been found dead.
Last month Col Malhaes appeared before Brazil's National Truth Commission, which is investigating past abuses.
He gave graphic testimony on how he had tortured many political prisoners. "I did my duty. I have no regrets," he told the commission.
He defended his actions saying that the people he killed and tortured were "guerrillas who fought an armed struggle".
Brazilian police say they are looking for CCTV images which might help identify Col Malhaes' killers.
On 1 April, Brazil marked 50 years since the 1964 coup that led to the military government.
President Rousseff said the atrocities committed during that time must never be forgotten.
Last month, he said he never regretted killing "as many people as necessary" and tortured "many" prisoners.
According to his wife, Col Malhaes was suffocated by three men who broke into their home. Police say the assailants stole computers and some guns.
"He was an important agent of political repression during the dictatorship and held much information about events that occurred behind the scenes at the time," Mr Damous said.
Activists in Rio de Janeiro mark the 50th anniversary of the coup that led to the 1964-1985 military rule, on April 1, 2014. Brazil recently marked 50 years since the 1964 coup that led to the 1964-1985 military government
Brazil 'must remember military rule'
31 MARCH 2014, LATIN AMERICA & CARIBBEAN
Brazil's 'house of death' remembered Watch
30 MARCH 2014, LATIN AMERICA & CARIBBEAN
22 APRIL 2014, LATIN AMERICA & CARIBBEAN
14 NOVEMBER 2013, LATIN AMERICA & CARIBBEAN
Fox News Latino Brazilian who tortured for military regime killed in robbery4hrs ago